မိမိ ကွန်ပျူတာကနေ ဖုန်းတွေ ကို Free ခေါ်ရအောင် ~ Nge Naing
မိမိ ကွန်ပျူတာကနေ ဖုန်းတွေ ကို Free ခေါ်ရအောင်
Tuesday, September 15, 2009 မိုးသွေးငယ် 22 comments
အမ ကသူ့ဘလောက်မှာ ခဏခဏ ဝင်ရေးဖို့ ခေါ် နေတာ အားနာ လာတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း အလုပ်ကမအားတော့ ဘာမှဝင်မရေးဖြစ်ဘူး။ ခု အမ မအားလို့ ပို့စ်တင်တာ ကျဲနေတုန်း အလည်လာတဲ့ မိတ်ဆွေတွေတွက် အားလုံး အကျိုးရှိမယ့် ကိစ္စလေးတစ်ခု မျှဝေပါရစေဗျာ။ သိပြီးသားဆို ရင်လည်း ဆောရီးပါ။ မသိရှိသေးသူတွေ အတွက်လို့ သဘောထားကြီးပေးပါဗျာ။
ဘာလည်းဆိုတော့ ကိုယ်ရဲ့ PC ကနေ နိုင်ငံ (၈) နိုင်ငံကို ဖုန်း ဖရီး ခေါ်လို့ ရတဲ့ ဆိုက်လေးတစ်ခု ကို မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဗျာ။(PC to Phone ) (အဲ အင်တာနတ်တော့ ရှိဖို့လိုတာပေါ့ :D ) ။ဒီလိုဗျာ အဲဒီဆိုက် ကို သွား အကောင့် တစ်ခုဖွင့် သူဖြည့်ခိုင်းတဲ့ ဘာညာ သာရကာ တွေကို ဖြည့်ပေး လိုက်ပါ။
နောက် အဲဒီဆိုက်မှာ ပေးထားတဲ့ ဆော့ဝဲလေးကို မိမိကွန်ပြူတာမှာ Save ,Run လိုက်ပါ။
Desktop ပေါ်မှာ MediaRing Talk ဆိုတဲ့ ဂျီတော့ရှော့ကပ်လို Shortcut icom လေး တွေ့ ရမယ် ။အဲဒီကောင်ကို ဖွင့်
ဂျီတော့လိုပဲ စောစောက ဖွင့်ထားတဲ့ အကောင့်က mrtalk id နာမည်နဲ့ password ကို ရိုက်ထဲ Sign in လိုက်ပေါ့ဗျာ။ ပြီးရင်တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံက မိတ်ဆွေရဲ့ ဖုန်းကို ခေါ်ပေတော့ ဗျို့ ဖရီးဗျာ။ကျွန်တော်စမ်းတာ တော်တော် အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ခက်တာက နိုင်ငံအားလုံးခေါ်လို့ မရတာ ဆိုတာပဲ။ အော် အလကား (၈) နိုင်ငံ ခေါ်လို့ ရနေတာတောင် ထပ်လိုချင်သေးတယ်။အဟား လောဘက ကြီးပါ့ နော်။
ကဲဗျာ ထားပါတော့ ကျွန်တော်ရေးထားတာ နားမလည်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်သာ အသေးစိတ် အဲဒီ ဆိုက်မှာ သွားကြည့်ပေတော့ ဗျာ။
အော် ... သွားရောက်အကောင့်ဖွင့်ရမည့်နေရာက ..........
=> ဒီနေရာမှာ <=
တကယ်လို့ ဆော့ဝဲ ယူလို့ အဆင်မပြေရင် ကျွန်တော် ထပ်တင်ထားပေးပါတယ် ။
ဒီအောက်က နေရာနေ ယူလိုက်ပါ။
တစ်ခါ ခေါ်ရင်( ၁၀) မီးနစ်ရပါတယ်။ ကျသွားရင် ခဏ နေ ပြီးရင် ပြန်ခေါ် လို့ ရပါတယ် ဗျာ။ဖရီး နော် နောက်ကျနေဦးမယ် ခုပဲစမ်းကြည့်လိုက်ပါလား..။ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ကွန်းမန်းမှာ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
September 15, 2009 at 7:14 AM Reply
အစ်မ မအားတဲ့အချိန်မှာ အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေး လာတင်ထားပေးတာ သိပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံတွေကို ခေါ်လို့ ရလဲဆိုတာ စမ်းကြည့်ဖို့ အချိန်တောင် မရသေးလို့ နောက်အားမှ သေသေချာချာ စမ်းခေါ်ကြည့်ရမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို Free ခေါ်လို့ရရင်တော့ သိပ်ကောင်းမှာပဲ။
September 15, 2009 at 3:00 PM Reply
မအားတဲ့ ကြားက ပို့စ်လေးတင်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာခေါ်စရာလူမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်... :P
မြန်မာပြည်ပါရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ... တစ်လ တစ်လ ဖုန်းကတ်ဖိုးတော်တော်သက်သာမယ် အိမ်က လူတွေကလည်း လိုင်းပေါ်လာရမှာ သိပ်ပျင်းတာ... ဖုန်းပဲခေါ်ရတယ် ပြောစရာရှိရင်...
September 15, 2009 at 7:44 PM Reply
အဲနီးဝေး ဖရီးဆိုတော့ ကောင်းပါတယ်ဗျာ
September 22, 2009 at 1:21 PM Reply
စမ်းသုံးကြည့်ပါမယ်ကွယ် ဟောင်ကောင်ပါလို့ ကျေးဇူးပါ
September 22, 2009 at 5:24 PM Reply
ရှစ်နိုင်ငံထဲမှာပါတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ခေါ်ရင် Free ရတာ သေချာတယ် မဆုမွန်၊ စမ်းတဲ့သူတွေက ဒီမှာဘာမှ မရေးသွားပေမယ့် ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောလာကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ရှိပါတယ်။
October 13, 2009 at 7:32 PM Reply
i had got the site
but difficult for me to call
October 13, 2009 at 8:02 PM Reply
If you're Burmese speaking person, just follow the instruction exactly what it's written. However, if you don't read Burmese, you need the instruction in English to get into it. I can help you that through this comment box. Please let me know if need it.
October 27, 2009 at 3:27 AM Reply
ကျွန်တော်ခေါ်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်..ဘာဖြစ်နေမှန်းကို မသိဘူးဗျာ...ကျန်တာတွေအဆင်ပြေတယ်.. ဖုန်းခေါ်လို့မရတာပဲ... အလားကားရလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်... တစ်ခုမှ မရဘူးဖြစ်နေတယ်... ပြောတော့ ၈ နိုင်ငံတဲ့ တစ်ခုမှ မရဘူး ဘာတွေလိုသေးလဲမသိဘူးနော်
October 27, 2009 at 6:26 AM Reply
လွမ်းဘွဲ့မှူး ဖုန်းခေါ်မရတာ ခေါ်လိုတဲ့ နိုင်ငံကို မရွေးပဲ ဖုန်းနံပါတ် တခါတည်း ရိုက်ထည့်လို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ကို မရွေးခင် A-Z အက္ခရာ အစီစဉ်အတိုင်း အောက်ကို ဆွဲချပြီး မိမိ ခေါ်လိုတဲ့ နိုင်ငံ နာမည် အရင်ရွေးရပါတယ်။ ရွေးလိုက်ရင် ဖုန်းနံပါတ် ရိုက်ထည့်ထဲ့ နေရာမှာ ရှစ်နိုင်ငံထဲမှ မိမိ ခေါ်ချင်တဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အလံလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ဘေးနားမှာ ရှိနေတဲ့ အစိမ်းလေး ဒါမှမဟုတ် Enter ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ စမ်းကြည့်ပါ၊ ရလိမ့်မယ်။ မရရင်လည်း ဘယ်နေရာမှာ မရဆိုတာကို အတိအကျ ထပ်ပြောရင် ပြန်ရှင်းပြပေးမယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။
October 29, 2009 at 5:27 AM Reply
Hello.. Ma Nge yae..
I tried it as you said.
But there was the message give me as "Insufficient balance and recharge".
So how should I have to do. Pls advise me...
လမ်းဘွဲ့မှူး၊ Leo နဲ့ Mmonthte တို့ ဖုန်းခေါ်လို့ အဆင်မပြေ သူတွေက တခုခု လိုနေလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Mmonhtet: ဟုတ်တယ်အစ်မရေ ခေါ်လို့မရဖူး။ဘါဖြစ်နေလဲမသိဖူး။ချင်ပူခေါ်တါမရဖူး။ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်ခေါ်တေါ့လဲမရဖူး။နိုင်ငံလဲပြောင်းတါပဲ။ခလုတ်နှိတ်ရင်အသံကြားရပြီးခေါ်လိုက်တါနဲ့ဘါမှမကြားရတေါ့ဖူး။ဘါဖြစ်လို့လဲဟင်။
28 Oct 09, 22:20
Mmonhtet: ဟုတ်ကဲ့အစ်မငယ်နိုင် သူပြောတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲ အစ်မငယ်နိုင်ခေါ်သလိုခေါ်တါပါပဲ။Calling ပြတါနဲ့ကိုအသံမထွက်တေါ့ဖူး။နောက်ခနပဲလိုင်းပြတ်သွါးတ
Mmonhtet ရေ- ညီမကတော့ ခေါ်လို့မရတဲ့ နိုင်ငံတွေကို သွားခေါ်လို့ မရတာလို့ အစ်မထင်လိုက်တယ်။ သြစကြေးလျား၊ တရုတ်၊ စင်္ကာပူ၊ ဗြိတိန်၊ ကနေဒါ၊ တိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်နှင့် အမေရိက (၈)နိုင်ငံကိုပဲ ခေါ်လို့ ရတာ။ တခြားကို ခေါ်လို့မရဘူး။
တခြားသူတွေ ဘာကြောင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ အဖြေသိရအောင် ဒီပို့စ်ကို တင်ပေးတဲ့ ကိုမိုးသွေးငယ်ကို မေးထားပေးပါတယ်။ ကျွန်မနဲ့ မိတ်ဆွေ အတော်များများကတော့ ခေါ်လို့ အဆင်ပြေကြပါတယ်။ ကျွန်မက ကွန်ပြူတာ skill ကလည်း သိပ်မကျွမ်းကျင်တော့ ခေါ်လို့ မရတဲ့သူတွေ ၀င်ရာမှာ ဘာမှားနေလို့ ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ မတတ်ဘူး။ သည်းခံပြီး ပြန်ကြိုးစားကြည့် ဒါမှမဟုတ် ကိုလတ် (မိုးသွေးငယ်) အားတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လို ထင်မြင်ချက် ပေးပြီး ရှင်းပြမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
October 30, 2009 at 1:00 AM Reply
Thank u , Ma Nge yae.....
Sorry for I don't have Myanmar key typing and how to type....... hae.. hae...
Pls solve for me the problem naw....
January 10, 2010 at 10:13 AM Reply
ကောင်းပါတယ် မင်းနေလ။ ဖုန်းခဈေးကြီးလွန်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှနိုင်ငံတချို့က ဒီထဲမှာ ပါတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ဖုန်းခေါ်ချင်ရင် သိပ်ပြီး အသုံးဝင်နိုင်လို့ ပြန်ရှယ်ရာမယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
February 10, 2010 at 3:46 AM Reply
February 15, 2010 at 10:03 AM Reply
မခင်ဦးမေ စမ်းကြည့်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖရီးခေါ်လို့ ရတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ကျွန်မဆီက အိမ်ဖုန်းနဲ့ ခေါ်ရတာလည်း သိပ်ဈေးမကြီးလို့ ကျွန်မကိုယ်တိုင် မခေါ်ဖြစ်ပေမဲ့ ခေါ်ဖူးတဲ့ မိတ်ဆွေတိုင်းက ရတ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဖုန်းစမ်းခေါ်ကြည့်သူများအနေနဲ့ ပြောထားတဲ့ Instruction တွေကို သေသေချာချာ မှန်အောင် လိုက်လုပ်ရင် ရမှာသေချာပါတယ်။ တကြိမ်မရရင် နောက်တကြိမ်တွေ ထပ်စမ်းသင့်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်လို ဖုန်းခ အဆမတန် ဈေးကြီးလှတဲ့ နိုင်ငံမှာတော့ ပြင်ပကို ဖုန်းခဏတဖြုတ် ခေါ်ချင်သူတွေအတွက် ဒီ Site လေးက အတိုင်းအတာ တခုထိ အသုံးဝင်မယ်ဆိုတာ သိလို့ ဘလော့ကို လာလည်တဲ့သူတိုင်း သုံးချင်ရင် သုံးလို့ရအောင် ရည်ရွယ်ပြီး Side bar မှာ ထည့်ထားပေးပါတယ်။ အသုံးပြုသူတိုင်း အဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
April 19, 2010 at 4:06 AM Reply
Hallo Nge Naing, I cann't make call. I don't know how to do . Already sinh up aswell. Can you help me ple. Thank you.
I'm on line now. I'll be waiting for you.
MOE YANN says:
May 14, 2010 at 12:04 AM Reply
အစ်ကို ရေ ။ ကျွန်တော် သုံးကြည့်တာ အဆင်မပြေဘူးဗျ
အစ်ကိုပြောတဲ့ အတိုင်းလုပ်တာ ပဲ
ကျွန်တေ်ာက နည်းနည်းပိန်းတယ် လေ။ ဟဲ ဟဲ နည်းနည်း လမ်းညွှန်ပါဦးအစ်ကိုရာ
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော် ပြန်စမ်းကြည့်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်အရင်ကသုံးပါတယ် ခုမသုံးတာကြာနေတော့ အသေချာ မသိဖြစ်နေတယ် စမ်းပေးပါမယ်။ လင့်ွတော့ပြန်စစ်ပေးထားပါတယ်။
May 23, 2010 at 3:17 AM Reply
အကိုရေ...ခေါ်ကြည့်တယ် မရဘူးဗျ..
ခေါ်လို့ မရတာတစ်ခုဘဲ ပြန်စမ်းပေးပါဦးအကိုရေ